Dharka hidaha iyo dhaqanka ee Jabaananka Dhaqanka Jabbaan | Wararka Safarka
Mariela Carril | 09/07/2021 09:30 | dhaqanka, Japan
Japan waa gurigeygii labaad. Marar badan ayaan halkaas joogey oo ma sugi karo inta cudurku ka dhammaanayo inuu dib u laabto. Waan jeclahay dalkan, dadkiisa, caloosha iyo dhaqankiisa. Japan waa Phoenix, shaki kuma jiro, iyo waxyaabo badan oo yaab leh maanta waxaan soo bandhigi doonnaa dharka dhaqanka japanese.
Halkan dadku waxay u labbistaan ​​sida ay rabaan, waxaad ogaan doontaa markaad dhex marayso jidadkeeda qofna ma arko waxa aad xidhan tahay. Laakiin sidoo kale, waa bulsho halka casriga ah ay kula nool yihiin kuwii hore, sidaa darteed kaarka caadiga ah ee boosta ayaa ah in la arko haween kaboon leh oo ag fadhida fuliyaha ciribta, labaduba waxay sugayaan tareenka rasaasta.
1 Dharka Japan
2 Dharka dhaqameed ee Jabbaan
Sidaan kor ku sheegay dharka japanese sida ay rabaan, iyadoo ay jirto faa iidada weyn ee aan cidina xukumin. Waxaa laga yaabaa inaad la kulanto haweeney qaan gaar ah oo u labbisan sida astaamaha anime ama nin da ’ah oo u labbisan sidii qof garanaya waxa, ganacsade caqli badan, shaqaale dhisme ah, ama dhowr dhallinyaro si farshaxan ah u farsameysan.
Waxaa jira moodooyin, dabcan waxaa jira, waxaa jira kooxo raaca iyaga, laakiin aniga waxay ila tahay in farqiga u yahay taas qofna ma eego waxa kale ee uu sameeyo. Waxaan ka imid dhaqan hadii huruud la isticmaalo xagaaga, kuligeen waxaan wada xirnaa huruud, waana kuwan kala duwanaanshaha qaarkood. In muuqaalka uusan muhiim aheyn waa weyn yahay. Miyaadan lahayn naaso waaweyn, jiinisku miyaanu kugu habboonayn adiga sida Jennifer Lopez? Yaa daneeya
Marka, haddii aad qorsheyneyso inaad aado Japan waa inaad ogaataa inaad ku dhex socoto waddooyinkeeda oo aad u kuurgasho dadkeeda waa khibrad dhaqameed oo weyn. Iyo haa, casriga, dhifka iyo cajiibka leh wuxuu ku dhex qasmayaa dhaqanka, yukatas, kimonos, geta sandals iyo inbadan.
Dharka dhaqameed ee Jabbaan waa kimono. Guud ahaan, kimonos-ka ayaa lagu sameeyaa dhar xariir ah, waxay leeyihiin gacmo dhaadheer oo ka taga garbaha ilaa cagaha, ama ku dhowaad, waxaa lagu hayaa suun ballaaran, the obi, iyo nolol maalmeedka waxay ku sii jireen munaasabado gaar ah ama xaflado dhaqameed.
Kimono xaddidayaa dhaqdhaqaaqa haweenka waana dhar qaali ah oo waqti qaadanaya in la xidho. Waxay la socotaa gacanta haweenka doorka ay ku leeyihiin bulshada reer Japan dhaqameed, kaaliyaha, wehelka, socodka cunnada. Waxaa jira kimonos jiilaal waxaana jira kimonos xagaaga ah, khafiifa, lakab yar, loo yaqaan yukatas. Carruurta ama dhalinyarada waaweyn waa inay xirtaan yukatas ciidaha xagaaga, sidaad runtii ku aragtay manga iyo anime badan.
Kimono waa dheddig iyo lab. Waa lakab iyo tirada lakabyadu waa inay la xiriiraan heerka dhaqaale ee qofka ama muhiimada bulshada. Kimonos-ka dumarka runti waa ka dhib badan yihiin kuwa ragga waxayna leeyihiin faahfaahin dheeri ah. Lakabyada midba midka kale ma daboolayo taasna waxay u oggolaaneysaa ciyaar runtii qurux badan oo xariiqyo midabbo leh leh.
Dharka lagu sameeyo kimono ayaa leh dherer la yiraahdo tan, qiyaastii 11.7 mitir oo dherer ah oo ballacuna yahay 34 sintimitir waa tan caadiga ah. Laba qaybood ayaa laga soo gooyey tan tan, mid in hore iyo kan horeba laga dhigo midig midna kan kale laga dhigo dhigooda. Tolmo toosan ayaa laga sameeyaa bartamaha dhabarka waana halka ay labada qaybood ku kulmaan oo dhererka mustaqbalka la laalaabo oo loo tolo jirka si loo sameeyo gacmo gashi.
Qoto-dheerida gacmaha ayaa ku kala duwan dharka ilaa dharka. Bilowgii qarnigii XNUMXaad, kimonos ayaa lagu sameeyay meisen, maro laga miiqay xariir laga helay dhuxulo cilladaysan. Markii dambe, markii la soo saaray mashiinnada dharka, adeegsiga nooca noocan ah ee dunta heerka hoose ah ayaa la dhammaystiray sidaas awgeedna waxaa la abuuray dhar jilicsan, qaro weyn, waara oo xoogaa ka jaban. Dharkaan waxaa lagu rinjiyeeyay midabyo macmal ah, oo wata farsamooyin hal-abuur leh, sidaas darteed dhammaan haweenka Jabaan waxay bilaabeen inay doortaan meisen-ka si ay u sameystaan ​​kimonos-ka caadiga ah.
Nooc kale oo kimono ah ayaa ah Tsukesage, waxoogaa ka caadi ah kimono-ka Homongi. Waxay leedahay naqshad fudud oo ka xishoon oo daboolaya aag yar oo dhexda ka hooseeya.
Waxaa jira qaab dhar dhaqameed aad u caadi ah geisha laga bilaabo Kyoto, ka SUsohiki. Haweenkan dhallintayar ahi way xidhaan markay qoob-ka-ciyaaraan ama farshaxanno caadi ah sameeyaan. Midabka iyo qaabeynta dharkaani waxay kuxirantahay xilliga sanadka iyo dhacdada geisha kaqeyb gasho.
Waa dhar dhaadheer, xoogaa yar haddii aan barbar dhigno kimono caadi ah, maxaa yeelay waxaa loo qaabeeyey si goonnada dhulka loogu jiido. Susohiki waxay cabireysaa in kabadan 2 mitir mararka qaarkoodna sidoo kale waxaa loogu yeeraa Hikizuru. Waxay sidoo kale u adeegsadaan markay qaadayaan heesaha Maikowho, qoob-ka-ciyaarka, ama ay ciyaarayaan shamisen (aaladda Japan-ka ee saddexda xadhig leh) Mid ka mid ah qalabkeeda ugu quruxda badan ayaa ah Kanzashi ie, timo siyaado ah oo ka samaysan qoryo lacquered, dahab, qalin, qolof digaag, xariir, ama caag ah.
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay inay jiraan dhowr nooc oo kimonos ah, marka waa kuwan magacyada kuwa ugu caansan qaarkood: furisode, gacmo-dheer oo ay xirtaan dumarka dhallinta yar markay gaaraan 20, the homongi, semi-rasmi ah, dheddig, si loogu isticmaalo aroosyada asxaabta, the Komon Waa wax iska caadi ah oo waxay leeyihiin nashqado badan, ugu dambayntiina ragga kimono, had iyo jeer ka fudud, ka rasmi badan, isku daraya hakama iyo jaakada haori.
Iyo yukatas? Sidaan soo sheegnayba waa kimonos fudud oo fudud, oo ka samaysan cudbi ama dunta synthetic. Waxay xirtaan gabdho iyo wiilal yar yar waana kuwo caan ah maxaa yeelay way fududahay in la ilaaliyo oo ka jaban. Yukatas dhaqan ahaan waa la dhihi jiray indigo, laakiin maanta waxaa jira noocyo kala duwan iyo naqshado iib ah. Hadaad booqato ryokan ama onsen waxaad qolkaaga ku lahaan doontaa mid aad ku adeegato intaad martida tahay.
Dhar kale oo Jabaaniis dhaqameed ah ayaa ah hakama. Waa mid loogu talo galay ragga waana dhar lagu xiray kimono. Waxay ku xidhan tahay dhexda waxayna ku dhacdaa qiyaastii jilbaha. Caadi ahaan dharkan waxaa lagu heli jiray madow iyo caddaan, oo leh xargo, in kasta oo ay sidoo kale jiraan moodallo buluug ah Waxaad ku arki doontaa hakama tartamayaasha sumo, markay ka qayb galaan munaasabad dadweyne ama xaflado rasmi ah. Waa wax u eg astaanta ninka japan.
Dhar kale oo dhaqameed ayaa ah happi Maxaa sameeya ragga ciidaha, gaar ahaan kuwa dheesha. Sabiibku waa shaati gacmaha suxul ku leh. Waxay leedahay weji furan, waxaa lagu xiraa xarigyo halka inta lagu faraxsan yahay ee lagu qurxiyo astaamo iyo naqshado naxdin leh loo isticmaalo xafladaha, munaasabadaha kale waxaa lagu xiraa dhexda suunka waana ka fudud yihiin. Naqshadaha qaarkood waxay ku yaalliin aagga qoorta mararka qaarkoodna gacmaha ayay u aadaan garbaha.
Ugu dambeyntiina, marka la eego fudeydka waxaan leenahay jinbei, caadi ah, oo la mid ah jiifkayaga, si loogu dhex wareego guriga ama ciidaha xagaaga. Waxay xirtaan ragga iyo carruurta, inkasta oo beryahan dambe dumarka qaarkood ay doortaan iyaga.
Dharkan dhaqameed ee Jabbaan ayaa lagu daraa kabaha alwaaxda ah ee loo yaqaan geta, lagu xidho ama aan lahayn sharabaadada tabi, kabo, maqaar ama kabo dhar ah, jaakada haori ee ay xirtaan dumarka iyo raga labadaba iyo kanzahi, shanlooyinka aad u qurux badan oo aan ku aragno madaxa haweenka Japan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Safarka Aasiya » Japan » Dharka dhaqameed ee Jabbaan